I-Lakeside cottage - amaminithi angu-5 ukuhamba ukusuka eStruman C - I-Airbnb
I-Lakeside cottage - amaminithi angu-5 ukuhamba ukusuka eStruman C
Storuman, Västerbottens län, i-Sweden
I-indlwana ephelele ibungazwe ngu-Jimmy
Hlala enkabeni yeStoruman kodwa usaqonde ngqo echibini eduze nemisebenzi yangaphandle njengokudoba, ukugibela izikebhe kanye nokuhamba ngezinyawo. Uma ukhetha amajikijolo noma ubamba izinhlanzi uzojabulela ifriji enkulu. Ziphekele ukudla kwakho ekhishini elinezinsiza eziphelele. Ikotishi lethu lilungele ukuzwa lokho uStoraman angakunikeza noma uvele uhlale ungenzi lutho. Izivakashi zethu zithanda indawo ezungezile ethule kanye nokubuka kompheme. Sicela uqaphele: Letha amalineni ombhede futhi uhlanze ikhabethe ngaphambi kokuhamba.
Eduze enkabeni yeStoruman kodwa namanje eduze kwechibi elinombono omuhle phezu kwalo. Ukuzisiza kusho ukuthi izihambeli ziletha amalineni azo ombhede futhi zihlanze ikhabethe lapho zihamba.
Eduze enkabeni kodwa kusenjalo ogwini olunokubukwa okuhle kwechibi. Kusebenza ukuzisiza, okusho ukuthi isivakashi siza nelineni laso lombhede futhi sihlanze ikotishi ngaphambi kokuphuma.
I-HDTV engu-43" ene- I-Chromecast, Isevisi evamile ye-cable kamabonakude
ubusuku obungu-7 e- Storuman
4.70 out of 5 stars from 107 reviews
4.70 · 107 okushiwo abanye
Ukusuka ekhabetheni ungabona amanzi ezinhlangothini ezimbili. Eningizimu kunendlu yomakhelwane bethu kanti enyakatho kunendlu yethu. Uma wehlela eStrandvägen traffic incane, ungakwazi ukuhamba emanzini amakhilomitha ambalwa noma ungahamba amamitha angu-700 uyothenga isidlo sakusihlwa edolobheni.
Zonke izihambeli ezifika lapho sivukile zizothola ukwamukelwa komuntu siqu. Abanye bangangena ngokhiye osebhokisini lokuphepha. Ikhabethe liseduze ne-villa yethu okwenza kube lula futhi kusheshe kimi ukuphendula uma kukhona okudinga ukunakwa. Kodwa futhi lokhu kusho ukuthi ungase usibone endleleni eya emsebenzini nasesikoleni. Kodwa sinobungane futhi sihlale sithi sawubona! :)
Zonke izihambeli ezifika lapho sivukile zizothola ukwamukelwa komuntu siqu. Abanye bangangena ngokhiye osebhokisini lokuphepha. Ikhabethe liseduze ne-villa yethu okwenza kube lula…